NJEHIE "NVSPCAP64.DLL AKỌWAPỤTARA MODUL HỤRỤ" - DLL - 2019
Wụnye njehie nvspcap64.dll
Mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ Avira nwere nsogbu dị iche iche na usoro ihe omume ahụ. Ọ ga-abụ maka njehie na edemede. Ya mere, ma ọ bụrụ na mmalite antivirus kachasị amasị gị, ị hụrụ ihe ederede: "Ihe nzaba ederede weere na ibe a" ma ọ bụ ihe ederede, mgbe ahụ n'usoro ihe omume, ihe gbanwere. N'ọtụtụ ọnọdụ, nsogbu dị otú a na-eme mgbe faịlụ mmemme dị iche iche mebiri emebi.
Download ihe ọhụrụ nke Avira
Otu esi dozie njehie edemede
1. Nke mbụ, jiri nlezianya gụọ ozi ahụ dọrọ anyị aka ná ntị banyere nsogbu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere windo na ederede: Ihie njehie Avira. Kedu otu esi edozi njehie na-enweghị iwegharị antivirus?
2. Ọtụtụ mgbe, nsogbu ahụ bụ mmebi nke faịlụ usoro ihe omume ahụ. Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ igosi nchekwa na nchekwa usoro. Na Windows 7 gaa na nchekwa ọ bụla na ngalaba "Tọọ". Ọzọ "Nhọrọ nchekwa na nchekwa".
3. Anyị chọrọ taabụ "Lee". Na nchịkọta nke Njirimara ndị na-egosi, ị ga-ewepụ ma gbakwunye agbatị ndị dị mkpa. Dị ka na foto a.
4. Ugbu a, anyị nwere ike ịmalite ịchọ ihe na njehie. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ windo na ederede: "Ụgha ederede eriri 523 agwa 196" ma ọ bụ "Ụgha ederede eriri 452 agwa 13". Mpaghara URL na-egosiputa ụzọ nke faịlụ anyị chọrọ.
5. Anyị na-achọ ya na kọmputa. Mgbe achọta faịlụ ahụ, ịkwesịrị ikpochapụ ọdịnaya ya. A na-enye njehie dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnwe ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha.
Ọ bụrụ na enweghị ike ihichapụ faịlụ, ma ịchọọ ịtinye antivirus ahụ, mgbe ahụ, onye ọrụ ahụ kwesịrị ịkpọtụrụ enyemaka Avira. Site n'ụzọ, ọbụna site na ntinyeghachi, nsogbu ahụ nwere ike ịnọgide ma ọ bụrụ na emezughị mwepụ n'ụzọ ziri ezi. Ụzọ kachasị mma isi dozie nsogbu ahụ bụ iji wepụ Avira na ngwaọrụ ndị di ya nwụrụ, wee kpochapụ kọmputa ahụ site na iji mmemme pụrụ iche. Mgbe ahụ i nwere ike itinye ngwa ahụ ọzọ. Nke a bụ ụzọ kachasị adaba na ịdabere na iji dozie nsogbu ahụ.